We Fight We Win. -- " More than Media ": 969 များ လိုက်လံ အနိင်ကျင့်လျက်ရှိနေတယ်။
969 များ လိုက်လံ အနိင်ကျင့်လျက်ရှိနေတယ်။
၉၆၉ အမည်ခံလူသုံးဦး ဟင်္သာတမြို့ စိုးစံ စားသောက်ဆိုင်တွင် ဆူပူအုံကြွမှု ဖြစ်စေရန် မိုက်ကြေးခွဲ ရန်စမှုဖြစ်ပွား
မတ်လ ၂၄၊ ၂၀၁၃
သတင်း - ၀ါးပင်လေး
ဟင်္သာတ။ ။ မတ်လ ၂၂ရက် နေ့ ည ၉နာရီကျော်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သော စိုးစံ စားသောက်ဆိုင်၌ ၉၆၉အမည်ခံ လူသုံးဦး အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျကာ ရန်စမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတ မြို့နေ ဒေသခံတစ်ဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ “စိုးစံ စားသောက်ဆိုင်မှာ မဖြစ်ခင် ဥယျာဉ်တောင်ရပ်ကွက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပိုင် 'အမှတ်တရ' လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ အဲဒီလူတွေ ၀င်စားသောက်ကြတယ်၊ ရှင်းခါနီးကျတော့ ပိုက်ဆံမပေးဘူး ဆိုင်ရှင်ကလည်း ရန်ရှောင်တဲ့ သဘောနဲ့ သည်းခံပြီး ဘာမှမပြောပဲထားလိုက်တယ်၊ အဲဒီကနေ သူတို့ ဥယျာဉ်မြောက် ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပိုင် စိုးစံစားသောက်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး စားသောက်ကြပြန်တယ်၊ စားသောက်ပြီးတော့ ထပြန်ဖို့လုပ်တဲ့အခါ ဆိုင်ရှင်က ပိုက်ဆံတောင်းတော့ ပန်းကန်တွေ၊ ခုံတွေ၊ စားပွဲတွေကို ရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးပြီး ဆိုင်ရှင်ကို လက်သီးနှင့်ထိုးကာ အဆိုပါလူရမ်းကားများမှ "မင်းတို့ ရခိုင်မှာ ဖြစ်တာတွေကို သိတယ်မဟုတ်လား၊ မိတ္ထီလာမှာလည်း ဖြစ်နေတာရော ကြားတယ်မဟုတ်လား ငါတို့က ၉၆၉အဖွဲ့က လူသုံးယောက်ပဲ" ဟုပြောပြီး ထွက်သွားကြတယ်” ဟု M-Media သို့ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆိုင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ပြည်သူများက မြို့နယ်ရဲစခန်းသို့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရာ ၉၆၉အမည်ခံ လူရမ်းကား သုံးဦးအား ဖမ်းဆီးရာ နှစ်ဦး ဖမ်းမိပြီး တစ်ဦး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလက ဟင်္သာတမြို့ ပဒေသာ ဈေးကြီးတွင် အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ဘာသာနဲ့ တစ်ဘာသာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ပျက်ပြားစေသော အရေးအသားများ ပါဝင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ဝေငှခဲ့ကြောင်း၊ မြင့်မြင့်ကြည် ထမင်းဆိုင် ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားရှေ့ ကိုကျော်စွာဆိုသူသည် ၉၆၉ ဗွီစီဒီ တရားခွေများ ဖြန့်ချီနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ko bobo said...
ဗမာမွတ်စလင် လူငယ်များ ကွန်ယက် ဆိုတာ ဘာသဘောနဲ့သုံးနှုန်းထားတာလဲ ???
ရခိုင်ပြည်က ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီမွတ်စလင်ကုလားတွေရိုဟင်ဂျာအမည်တပ်ပြီးသမိုင်းလိမ်ဖို့ကြိုးစား
နေသလိုမျိုး ပြည်တွင်းက မွတ်စလင်ကုလားတွေ ဗမာမွတ်စလင် နာမည်တပ်ပြီး သမိုင်းတစ်ခု ထပ်လိမ်ဖို့ အစပျိုးနေတာလား (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာလား ???
ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတာ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမရှိခဲ့ဘူး .. ဗမာထဲမှာ မွတ်စလင်ဆိုတာမရှိဘူး .. မွတ်စလင်ဖြစ်သွားရင် ဗမာ မဟုတ်တော့ဘူး .. မွတ်စလင်ထဲဝင်သွားရင် အဲ့ဒီ့လူကို ဗမာ လို့မသတ်မှတ်တော့ဘူး ..
အရှင်းဆုံးပြောမယ်ကွာ .. ဗမာမွတ်စလင်လို့ သုံးနှုန်းတာ လုံးဝသည်းညည်း မခံနိုင်ဘူး .. ခွေးရူးကိုက်တာထက်နာတယ်ကွာ ..
ဒီကိစ္စကိုဗမာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး လက်ပိုက်ကြည့်မနေကြပါနဲ့ .. ဒါဟာ သမိုင်းတစ်ခု ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်သွားအောင် အစပျိုး ဇာတ်လမ်းဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် .. အခုချိန်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသား
မရှင်းရင် နောင်တချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီမွတ်စလင် ကုလားတွေ သမိုင်းလိမ် နေသလိုမျိုး ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ပြန်ဖြေရှင်း ရတဲ့ ပြသနာကြီးတခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ..
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ ဒီကိစ္စကို ပြတ်ပြတ်သားသားဖြေရှင်းပေးပါ .. အခုချိန်မှာ မရှင်းပေးရင် ဖြေရှင်းရခက်ခဲတဲ့ ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်းလို ပြသနာမျိုးတွေ ကြုံလာပါလိမ့်မယ် ..
အခုတောင်ဗမာတိုင်းရင်းသားအများစုရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဒီလိုအသုံးအနှုန်းကြောင့် ခံပြင်းဒေါသထွက်ခြင်းတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ် ..
ယမ်းပုံမီးကျ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ အခြေအနေမျိုးတွေ မကြုံတွေ့ခင်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးပါ .. မီဒီယာတွေ မသီတာထွေး အသတ်ခံရတဲ့အမှုမှာ မွတ်စလင်တွေလို့ သုံးနှုန်းခဲ့လို့ ပြည်တွင်းထဲက မွတ်စလင်ကုလားတွေ ဘယ်လိုယမ်းပုံ မီးကျ ဒေါသတွေပေါက်ကွဲပြခဲ့ကြလဲ ..
ဆူးလေဘုရားရှေ့က မွတ်စလင်ကုလားတွေ ဆန္ဒပြတာကို သတိရ လိုက်ကြပါ .. အခု ငါတို့ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေ ကိုစော်ကားခြင်း၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားနာမည်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အလွဲသုံးစားလုပ် ယူသုံးခြင်းကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး ..
(အခုလောလောဆယ် ပထမဆုံးတုန့်ပြန်ခြင်းအနေနဲ့ ဒီစာထဲမှာ မွတ်စလင်ကုလားလို့ သုံးနှုန်းရေးသားထားတယ် .. နောက်နောင်လဲ ရိုဟင်ဂျာဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ကုလား၊ဘင်္ဂလီဆိုရင် ဘင်္ဂ
လီမွတ်စလင်ကုလား၊ပြည်တွင်းကဆိုရင် ပြည်တွင်းကမွတ်စလင်ကုလား ဟုသာ သုံးနှုန်းသွားပါတော့မည်)
24 March 2013 at 16:40
ငါလိုးမသား မိုးသီး.. လီးမို့ ဆောက်ဆင့်မရှိတဲ့သတင်းတွေတင်နေတာလဲ။
ငါလည်း ABDF အဖွဲ့ က မိုးသီးဇွန်ဆိုတာငါပဲလို့အဲဒီလို ဆဲပြီးပြောသွားရင် မင်းယုံမလား။
အင်တာနက်မှာ ကြည်မလား ယခင် မြန်မာမယူရင် ဗလီကငွေထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာ ဖတ်မလား မြန်မာပြည်မှာ နေပြီး မြန်မာကို စော်ကားယုတ်မာဖို့ ကြံနေတဲ့ အကျိုးဆက်တွေပဲ ဒါကိုအရင်ရှင်းရမယ်
25 March 2013 at 00:06
အင်တာနက်မှာ မြန်မာမလေးတွေကို မွတ်ဆလင်ကုလား စော်ကားနေတာ တမင် ယုတ်မာပြနေတာ တွေ့တယ် မဟုတ်လား ဒါတောင် ကုလားတကောင်ပဲ ရှိသေးတယ် မနာတတ်ဘူးလား
25 March 2013 at 00:07
တခုပဲ ရှင်းရှင်းပြောမယ် မွတ်ဆလင်တွေက စပြီး မစော်ကားခဲ့ရင် ရခိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိတ္တီလာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာဒေသမှာဖြစ်ဖြစ် ဘာမှ ဖြစ်လာစရာမရှိဘူး ဖြစ်လာမှ အချင်းချင်းစောက်ပြစ်တင်နေတဲ့ သူတွေကိုပြောချင်တယ်
မန်မာပြည်ကို ကျေးဇူးမပြုရင်နေပါ။ ဖင်လှန်မပြပါနဲ့ ကိုမိုးသီး
ဗုဒ္ဓဘာသာ၉၆၉ အထိမ်းအမှတ်ကို နာဇီတံဆိပ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး စော်ကားထားပါတယ်။ အဲဒါထက်ပိုဆိုးတာက ကိုမိုးသီးလို အမေရိကန်က အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ၊လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ နိ်ုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိသူက သူ့ facebookမှာ ခုလို ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို အကြမ်းဖက်သမားမကောင်းဆိုးဝါးလို့ မြင်စေနိုင်တဲ့ပုံနဲ့အတူ Many Business shops have been forced by Myanmar Buddhist extremists to posta969 sign in Burma ဆိုပြီး ရေးထားတော့ မတရားရန်စခံရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ပိုပြီးနာမည်ပျက်အောင် ကိုမိုးသီးလုပ်နေတာနဲ့အတူတူပဲ။ ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘက်က မရပ်တည်ရင်နေပါ။ ခုလို ဘာသာခြားဘက်ကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နာမည်ပျက်အောင် အောက်တန်းကျစွာ လုပ်တာဟာ ကိုယ်မွေးတဲ့နိုင်ငံက မြန်မာတွေကို စော်ကားရာကျပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့အလည်မှာ နာမည်ပျက်အောင် ကျေးဇူးကန်းရာကျပါတယ်။
ကိုမိုးသီး မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံရေးဖျာခင်းဖို့ဆိုပြီး မြန်မာပြည် ပြန်လာတော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့ဘူး။နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တော့အမေရိကန်မှာ ဖိနပ်နဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့ သမ္မတကို ခြေသလုံးဖက်ဖို့ မြန်မာပြည်ပြန်ပြေးလာပေမဲ့ သမ္မတကြီးက အတွေ့မခံခဲ့ဘူး။ အမေစုကလည်း အတွေ့မခံဘူး။ ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းကြီးလို ပြည်သူက ကြိုဆိုမှာကို မျှော်မှန်းထားပေမဲ့တကယ်ရလိုက်တာက ပြည်သူလူထုရဲ့ ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချသံတွေ ဆဲဆိုပြစ်တင်သံတွေ။ ဒါတွေကြောင့် ကိုမိုးသီး မြန်မာပြည်ကို စိတ်နာသွားပြီး မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အငြိုးနဲ့ နာမည်ပျက်အောင်လုပ်နေတာလား?
ကြုံလို့ ကိုမိုးသီး မြန်မာပြည် လာတုန်းက ဘင်္ဂါလီိအရေးပြောခဲ့တာကို အခုရေးမယ်။ အဲဒီတုန်းက ကိုမိုးသီးက ဘင်္ဂါလီတွေ ရခိုင်မှာနေတာ ဘာဖြစ်လဲ မြန်မာတွေလည်း ထိုင်းမှာ သန်းနဲ့ချီပြီးနေတာပဲလို့ ပြောခဲ့တယ်။ကိုမိုးသီး နိုင်ငံရေးသမားလုပ်ပြီး စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းတအားနည်းတာကို ပြတာ။ မြန်မာတွေ ထိုင်းမှာ သန်းနဲ့ချီနေနေတာ ဘယ်သူမှ အပြီးမနေကြဘူး။ အချိန်တန်အိမ်ပြန်မဲ့သူတွေကြီးပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ ခဏသွားနေကြတာ။ ဘယ်သူမှ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသားပါဆိုပြီး မလိမ်ကြဘူး။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့် ဘာအခွင့်အရေးမှ မတောင်းဆိုဘူး။ ထိုင်းဒေသခံတွေကို ဒုက္ခမပေးဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကို သူ့နိုင်ငံသားတွေ မလုပ်တဲ့ဈေးပေါပေါနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတာ။ ဘင်္ဂါလီတွေကို သမိုင်းမလိမ်ဘူး။ နယ်မြေမတောင်းဘူး။ ဒေသခံကို မုဒိမ်းမကျင့်ဘူး။ အိမ်မီးမရှို့ဘူး။
ခင်ဗျားလို အမေရိကန်လို နိုင်ငံမှာ တရားဝင်အေးဆေးနေခွင့်ရှိထားသူတောင် မြန်မာပြည်ကို အခွင့်အရေးရရင် ပြန်လာနေချင်တာ မြန်မာ့စိတ်ဓာတ်ကို ခင်ဗျားသိသင့်တာပေါ့။ ဒါကို ရခိုင်ပြည်နယ်ကကျူးကျော်ဘင်္ဂါလီနဲ့ ထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို နှိုင်းယှဉ်တာ ခင်ဗျားတော်တော်ရှော်တာပဲ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို မကူညီရင်နေပါ။ မြန်မာပြည်မှာ နေရာမရတာနဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ စားခွက်ကို သေးပန်းပြီး ကျေးဇူးကန်းတာမျိုးတော့ မလုပ်စေချင်ဘူး။မြန်မာပြည်ကို ကျေးဇူးမပြုရင်နေပါ။ ဖင်လှန်မပြပါနဲ့ ကိုမိုးသီး။
ဟေးကောင်း ခွေးမသား ဒီမိုးသီဆိုတဲ့ကောင်း ထမင်းစားသလားချီးစားသလား၊မင်းပထွေးတွေရက်စက်ယုတ်မာတာကျတောမဖော်ပြဘူးအခုသတင်းဟာလည်းမူဆလင်ကုလားတွေရဲ့ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာပြီးသတင်းမှားပေးတာဘဲနေမှာ ၊ ရခိုင်ဖက်မှာလဲအဲသလို မျိုးသတင်းမှားတွေပေးပြီး လုပ်ကြံတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ မင်းအသေအချာမစုံးစမ်းဘဲနဲ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုသိက္ခာကျအောင်မလုပ်နဲ
ko bobo ဆိုတဲ့ကောင်၊ မင်းကကော ဘာသဘောနဲ့ မေးတာလဲ။
မင်းစောက်သံကိုက အဓိကရုဏ်းဖြစ်စေချင်တဲ့ စောက်ရေးမပါတဲ့အသံ။
မင်းဘာမင်း ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက်တွေကို ကိုယ်စားပြုပြောရင်ပြော။ လူစိတ်ရှိတဲ့ ဗမာတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို လာဆွဲမထည့်နဲ့။ မင်းကျွန်မဟုတ်ဘူး။
ဗမာမွတ်ဆလင်လို့သုံးတာ ခွေးရူးကိုက်တာထက် နာတယ်ဟုတ်လား။ မှတ်ထားဟေ့ ခွေးရူးမို့ ရိုက်စရာရှိတာ ရိုက်ပလိုက်တာ။ တကိန်ကိန်နဲ့ ခွေးက လူပြန်ဟစ်နေသေးတယ်။
25 March 2013 at 05:11
မိုးသီးဇွန် မင်းကိုပြောလည်းခွေး ပါးစောင်းတီးညဖစ်တော့မယ်။မင်းပထွေးတွေ က သက်သက် ၉၆၉ နာမည်ဖြတ်ချင်လို့ လာရမ်းတဲ့ လူတွေက ၉၆၉ ပြောသွားပါတယ်ပြောတာ။မင်းကပါ ခွေးရူးပြန်ချင်နေတာလား။မင်းလည်းတော်တော် ခက်မယ်။မင်းပထွေးတွေ ဘင်္ဂလားမှာ ငါတို့ဘာသာ ၀င်တွေ လူမျိုးတေါကို နှိမ်နေတာ။ရက်ရက်စက်စက် သက်နေတာတုန်းက မင်းပါးစပ်ထဲကုလားဘာဝင်နေလို့ အသံမထွက်တာလဲ။